Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 December, 2013, 16:16 GMT 19:16 SGA
Daawo sawirro ku saabsan shirka London.
7 Mey 2013
Wufuud ka kala socota in ka badan konton dal iyo hey'ado caalami ah ayaa ka qeybgalaya shirka caalamiga ah ee Soomaaliya ee London. Shirka waxa wada guddoominaya Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron iyo Madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
600 ayay gaartay dhimashada Bangladesh
Dowladda Bangladesh ayaa sheegtay in dhimashada warshdaii ku duntay magaalo madaxda Bangladesh ee Dhaka ay gaartay 600 oo qof.
5 Mey 2013
Ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari uu lahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya.
UK waxay isku dayaysaa in beesha caalamka ay taageero siiso dowlaadda Soomaaliya shirka Talaadada ka dhacaya London. Haddaba maxay muhiim u tahay Soomaaliya?
4 Mey 2013
Maxay Soomaaliya muhiim u tahay?Daawo02:23
In ku dhaw 260,000 oo qof ayaa ku dhintay macluushii Soomaaliya ka dhacday 2010 ilaa 2012, sida ay sheegtay daraasad cusub. Warbixintu waxay sheegtay in waxa ka dhacay Soomaaliya ay ahayd gaajadii ugu xumeyd 25 sano ee u dambeeyay.
3 Mey 2013
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho ku jooga Garoowe si uu wadahadal ula yeesho madaxda Puntland kahor shirka London ee Soomaaliya.
28 Abriil 2013
Banaanbaxyo ka socda Sudan
Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeedaa dhul beero oo ay dowladda ka iibisay ganacsato Khaliijka si ay uga hesho lacag.
27 Abriil 2013